Madaxweynihii hore Cameroonian Saidou Alioum, kaaliyaha Tababaraha Turkiga ee Basaksehir ee tartanka Turkiga - Kulturebene - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Madaxweynihii hore Cameroonian Saidou Alioum, oo ah macallin ku xigeenka hogaamiyaha horyaala ee magaalada Istanbul - Culturebene
Siciidii hore ee Cameroon Saidou Alioum, oo ah macalin ku xigeenkii hogaamiye ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Wuxuu ku dhashay Maroua 19 February Febraayo 1978 Calioum Saidou wuxuu ahaa ciyaaryahan qadka dhexe ah. Wuxuu bilaabay xirfaddiisa munaasabadda Maroua ee xilligaas lagu sameeyay Habib Fire, waxa uu ahaa Ceelle Abderamane Gires, Kariré Aboubacar iyo kuwo kale. Saïdou Ebongué (naaneeyskiisa) wuxuu ku biiray Coton Sport de Garoua oo uu ku guuleystay Cameroon oo ku guuleystay 97 iyo 98. 1999, waxaa lagu arkay kooxda Turkiska ee IstanbulSpor halkaas oo uu ku qaatay sanadihii 5. Ka dib, waxa uu ku biiray naadiga dabiiciga ah ee magaalada Galatasaray ee Istanbul sanadihii 2. Dhamaadkii qandaraaskiisa, wuxuu ku sii qulqulay FC Nantes, halkaas oo uu u ciyaaray qadka dhexe difaac hal xilli ciyaareed.
2007, wuxuu saxiixay qandaraas qandaraas ah oo ah 3 oo leh Kayserispor. Bishii Agoosto 2010, wuxuu ku jiraa xilli uu ku sugan yahay Sivasspor.
In Alioum 2014 bilaabo xirfadiisa tababarenimo ee Istanbul BASAKSEHIR sida indheynta ah inta lagu guda jiro xilli 2 (qorista ciyaartoy da 'yar oo soo maray sida cengiz hoos Ace Rome, E. Adebayor, Gael Clichy iyo ... ..).
Tan iyo markii 2016, Alioum Saïdou waa caawiye tababare ee basaksehir, hogaamiye kooxeed ee tartanka Turkiga. Robinho, Adebayor, Clichy, Arda Turan, Demba Ba iyo xiddigo badan oo kale ayaa hoos yimaada.
Kubadda cagta: Halkan waa sida Cameroon u maamulaan si ay uga hor tagaan luqadaha xun
Zidane wuxuu doonayaa Mbappé, Sidee kooxda France? - Maalinta #439 - VIDEO